बामदेव भने ‘घर न घाट’को राजनीतिक भविष्य नै समाप्त ! | Dainik News Nepal
बामदेव भने ‘घर न घाट’को राजनीतिक भविष्य नै समाप्त !
शनिबार, भाद्र १९ २०७८
काठमाडौं । हक्की स्वभावका वामदेव गौतम नेपाली राजनीतिमा चर्चित नाम हो । तर उहाँले नेकपा एमालेको उपाध्यक्षसहित सबै पदबाट राजीनामा गरिसक्नु भएको छ ।
आफ्नी श्रीमतीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराइसकेका गौतमले आफ्ना लागि भने जबज मान्नु पर्ने सर्त अघि सार्नु भएको छ । एमालेबाट राजीनामा र एकीकृत समाजवादीले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नमान्दा वामदेव गौतमको राजनीति यतिबेला घर न घाटको भएको छ ।
नेकपा विवाददेखि एमालेको विभाजनसम्म आइपुग्दा अन्तरपार्टी संघर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएका पात्रको नाम हो वामदेव गौतम । उहाँको अस्थिर चरित्रको फाइदा केपी शर्मा ओलीदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालसम्मले उठाए ।
त्यही चरित्रले एमालेको नवौँ महाधिवेशनका किङ मेकर रहेका गौतमको शक्ति अहिले आएर क्षयीकरण मात्र भएन, राजनीतिक रूपमा घर न घाटको हुनु परेको छ ।
महाधिवेशनपछि पनि एमालेभित्रको शक्ति संघर्षमा गौतम जता ढल्कियो, केन्द्रीय कमिटीमा उतै बहुमत पुग्ने स्थितिसमेत थियो । तर, नेकपा र पछि एमालेभित्रको गुटगत ध्रुवीकरणमा दुवै समूह उहाँको भर पर्न छाडे । एक्लिँदै गएका गौतमले पार्टी एकता अभियान चलाउँदा केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीको मात्र साथ रह्यो ।
अहिले पराजुली र गौतमकी श्रीमती तुलसा थापाले समेत एकीकृत समाजवादी रोज्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव हारेका गौतमलाई अर्को कुनै सांसदलाई राजीनामा गराएर भए पनि संसदमा छिराएर प्रधानमन्त्री बनाउने सपना देखाइयो । त्यो सहज नभएपछि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत हुने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका कोसिस भए ।
एक पटक जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षाले ७४ हिउँद काटिसकेका गौतमलाई वल्लो तिर न पल्लो घाट बनायो ।
ओली र प्रचण्ड–नेपालले पार्टीभित्रको गुट लडाइँमा गौतमलाई बारम्बार प्रयोग गरिरहे । कुनै बेलाका हक्की नेता गौतमलाई पदको लोभले ढुलमुले बनाइदियो । गौतमका गतिविधिमा विरोधाभाष देखियो ।
पार्टी एकता अभियान चलाएका गौतम नेपाल खनाल समूहले पार्टी खोले त्यतै लाग्छु भनेर सबैभन्दा पहिले वक्तव्य निकाल्ने पनि उहाँ नै हुनुभयो । अहिले एकीकृत समाजवादीमा पदको वार्गेनिङदेखि जनताको बहुदलीय जनवादलाई पथ प्रर्दशक सिद्धान्त मान्नु पर्ने सर्तले उहाँलाई फेरि यता न उताको बनाएको छ । किनकी त्यो सर्त मान्न नेपाल खनाल पक्ष सहमत छैन ।
पार्टी विभाजन पहिले नै नयाँ पार्टीमा जाने घोषणाले उहाँलाई एमालेमै बसिरहन नैतिक संकट परेपछि राजिनामा दिन बाध्य हुनु पर्यो । अनि छलफल र वार्ता अघि नै जवजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नु पर्ने सर्तले नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेशको सम्भावना पनि कठिन देखिएको छ ।
एमाले परित्याग गरेको, उमेर र सहकर्मीले समेत साथ छोड्दै गएको अवस्थामा निसर्त एकीकृत समाजवादी प्रवेश वा राजनीतिबाट सन्यास लिनुबाहेक गौतमसामू अर्को बिकल्प दैखिदैनन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीनेकपा एमालेबामदेव गौतम